DEG DEG: Sheekh Aadan Madoobe oo noqday musharaxii ugu horreeyay ee qaaata shahaadada musharaxnimada. | dayniiile.com
Home WARKII DEG DEG: Sheekh Aadan Madoobe oo noqday musharaxii ugu horreeyay ee qaaata...
DEG DEG: Sheekh Aadan Madoobe oo noqday musharaxii ugu horreeyay ee qaaata shahaadada musharaxnimada.
Guddiga qaban qaabada doorashada Guddoonka Golaha Shacabka ayaa maanta bilaabay diiwaangalinta musharixiinta u taagan xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo labada kuxigeen. Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Soomaaliya, Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Sheekh Aadan Madoobe) ayaa noqday musharixii ugu horreeyay ee is diiwaan galiya oo qaata Shahaadada Musharaxnimada.
Sheekh Adan Madoobe ayaa maalmihii ugu dambeeyay gudaha dalka iyo dibadda ka waday ololle xoog leh oo uu ku soo bandhigayo musharaxnimadiisa xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka isaga oo kulamo kala duwan la yeeshay xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka 11aad, Beesha caalamka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed.
Musharax Sheekh Aadan Madoobe oo aan qabin dhaawacyo hore oo siyaasadeed, Golaha Shacabkana ku dhex leh saameyn xoog leh ayaa qaba rajo fiican oo ku aaddan in markale uu hoggaamin karo Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Xildhibaanada cusub ee Golaha Shacabka oo raadinaya Guddomiye awood u leh ilaalinta sharafka Golaha, awoodsiinta Golaha iyo kala saaridda laamaha dowladda sidoo kalana maamuli kara shaqooyinka kusoo food leh ayaa la sheegay iney dooq muhiim ah u arkaan Sheekh Adan Madoobe oo soo maray tijaabo guuleysatay.
Bartamaha toddobaadka dambe ayaa lagu wadaa in la doorto Guddonka labada Aqal ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaana Muqdisho ka socda olollihii u dambeeyay ee musharixiinta.
Previous articleMaxkamadda sare ee dalka oo Maanta dhageysatay dacwadda hakinta kursiga Fahad Yaasiin goaane kasoo saari doonto dhawaan
Next articleCiidamada Dowladda oo la Wareegay degaano u dhow Dhuusamareeb
Safiirka dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya oo MW Xasan Shiikh ugu...